Sida loo sameeyo baraf markaad wax ka iibsanayso App Store | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo sameeyo baraf markaad wax ka iibsanayso abka Apple Store
Sida loo sameeyo baraf markaad wax ka iibsanayso abka Apple Store
Soo gal ruuxa dabbaaldegyada adiga oo ka dhigaya baraf gudaha App Store-ka Apple Store inta aad wax ka iibsanayso daqiiqadaha ugu dambeeya. Apple ayaa marlabaad ku dartay animationn qabow ukunta Easter-ka, taas oo aad isla markiiba dhaqaajin karto, ka hor ciidaha.
Waa kuwan sida ay u shaqeyso.
Baraf ku samee gudaha App Store-ka Apple Store
Apple si dhab ah uguma weyna ukunta Easter-ka ee ku dhex jira barnaamijyadeeda. Waxa inta badan laga helaa martiqaadyada muhiimka ah, kuwaas oo nool marka lagu sawiro iPhone. Laakiin sannadihii ugu dambeeyay, Apple ayaa ka dhigaysa baraf fasaxyada.
Si aad u bilowdo dabaylahaaga, marka hore hubi in aad haysato noocii ugu dambeeyay ee App Store ee Apple Store lagu rakibay iPhone-kaaga ama iPad-kaaga. Dabadeed, fur oo ku qor baraf ha daa galay bar raadinta. Hadda fadhiiso oo daawo sida ay u dhacayso.
Waxa kale oo aad ruxdi kartaa qalabkaaga si uu baraf-tooska ahi u wareego, oo ah sida globe baraf oo kale. Waxaan kugula talineynaa inaad ka shaqeysiiso habka mugdiga ah ee qalabkaaga ka hor intaadan tijaabin sababtoo ah waxay u egtahay mid aad uga fiican asalka madow.
Apple waxa loo dejiyay ciidaha
Ma doonaysaa dareeno farxadeed oo dheeraad ah? Hubi inaad hubiso xayaysiisyada fasaxa ee Apple, oo gabi ahaanba lagu toogtay iPhone 13, kaas oo ka sheekeynaya sheekada gabadh yar oo ka badbaadisay baraf baraf ah oo si xun ula dhacay, ka dibna ku sii noolaya qaboojiyaha sanadka oo dhan.
Sidoo kale u fiirso hadiyadaha fasaxa gaarka ah gudaha Apple Music, hana iloobin in marka aad si toos ah uga soo iibsato Apple ka hor dhamaadka sanadka, waxaad ku raaxaysan kartaa muddo dheer oo soo celinta dhammaan qalabkeeda.
Bixinta - Ku guulaysta 1 ee 6 Ruqsadaha Hubinta Suuqgeynta Ka baxsan ee Saamaynta ah
Adeegyada Maareynta iyo Dayactirka WordPress ee ugu Fiican 2022